Mpanamboatra & Kolo-saina Klasika - Orinasa Krizy mahazatra China
Welding vita amin'ny metaly
Laser cladding dia teknolojia fanovana vaovao vaovao. Manampy fitaovana mametaka eo am-bavan'ny substrate izy io ary mampiasa taratra laser avo lenta amin'ny angovo hanondrahana azy miaraka amina manify eo ambonin'ny velarinan'ilay akora hamolavola takelaka mifangaro mampitambatra miaraka amin'ny metallurgy amin'ny tany. ...
Fanadiovana sy fanodinana vita amin'ny laser amin'ny alàlan'ny coating
aser manadio faritra sy efamira oxide
Ny fanadiovana laser Lingxiu dia manaisotra ny otrikarena metaly sy ferrous ary tsy ferrous amin'ny metaly, ka ny kalitaon'ny entona sy ny sakamalaho dia avo, ary hita ny welding rehefa voasasa ny lavenona. Ny takelaka vita amin'ny vy sy aluminium dia azo diovina mialoha aorian'ny fahaterana. I ...
Matsiro manadio menaka (ankoatry ny loko).
Ny fanesorana ny vatan-kapoka laser
Azo diovina haingana, madio ary marina ny fanesorana ny takelaka haing-trano Portable haingon-trano fanamboarana milina fanodinana tsy manimba ny substrate; Azo ampiasaina mandritra ny fotoana maharitra miaraka amin'ny vidin'ny fandidiana ambany; Ny fitaovam-piasana dia mahatsapa ny fandidiana mandeha ho azy sy ny fampiharana tsotra; Fiarovana ny tontolo iainana ...
Famolavolana kodiarana vita amin'ny vy matevina
Rehefa miseho ny fanamby fanadiovana bobongolo kodiarana, ny laser Lingxiu dia efa manana vahaolana feno sy mahomby - avy amin'ny tanana ka hatramin'ny rafitra fanadiovana laser mandeha ho azy. Tany malefaka madio. Ny rafitra fanadiovana laser mandeha ho azy dia afaka manadio ny singa matevina marobe amin'ny fomba marina, ...
Fibre Cutting Machine 500w, Tamin'ny laser fibre Cutting Machine, Carbon Fibre Cutting Machine, Laser Fibre nanapaka Machine,